969 အဖွဲ့မှ အကြမ်းဖက်ရန် လှုံ့ဆော်နေသော်လည်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များမှ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းလျှက်ရှိ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Argentina’s Bergoglio elected first Latin American pope
ဘူးသီးတောင်မှာ ဒုတိယနှစ်ရိုဟင်ဂျာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦး အသတ်ခံရ »
969 အဖွဲ့မှ အကြမ်းဖက်ရန် လှုံ့ဆော်နေသော်လည်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များမှ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းလျှက်ရှိ
(၂) သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်မှူးဇော်ဌေး (အင်တာနက်အမည် မှူးဇော်) ဆိုသူမှ အင်တာနက်တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအား အကြမ်းဖက်သမားများအသွင်ဖြစ်အောင်
သတင်းမှားများ ဖြန့်ချိခဲ့သည့်အပြင် အခင်းဖြစ်နေရာ၌ တစ်ဖက်မြင်ပုံရိပ်ဖြင့် ရိုက်ကူးထားသည့် ဓာတ်ပုံများအား ပြည်တွင်းမီဒီယာတချို့နှင့်ပူးပေါင်း၍ နိုင်ငံအ၀ှမ်း ပျံ့နှံ့အောင် ဖြန့်ဖြူခဲ့ခြင်း
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦးမှ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ဦးအား ကူညီပေးနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ fb)
စစ်ယူနီဖောင်းချွတ်ပြီး သမ္မတဖြစ်လာသော ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထပ်တွင် မြန်မာ့သမိုင်း၌ အဆိုးရွားဆုံးသော ဘာသာရေးအကြမ်းဖက်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။
ယင်းဖြစ်စဉ်များကြောင့် အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံများစွာ ဖြိုချ ဖျက်ဆီးခံရခြင်း၊ ပိတ်ပင်ခံရခြင်းများ ရှိခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ထောင်သောင်းချီ၍ အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
“လက်ခုပ်ဆိုတာ နှစ်ဖက်တီးမှ မြည်သည်”ဟု စကားပုံအရ ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက် အကြမ်းဖက်ခံရမှုများတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များသည် တစ်ဖက်သက် အကြမ်းဖက်ခံရခြင်းများသာ ဖြစ်တယ်လို့ လေ့လာသူများက ဆိုပါတယ်။
ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ဘာသာရေး ဖိနှိပ်မှုများတွင် အာဏာပိုင်များမှ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ မွတ်စလင်မ်အများစုမှ သံသယ ဖြစ်လျှက်ရှိပါတယ်။
ယင်းသို့ သံသယများ ပေါ်ပေါက်ရသည့်အကြောင်းအရင်းများစွာရှိသည့်အနက် အချို့ကတော့…
(၁) ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စစ်တွေမြို့တွင် အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာ အကြမ်းဖက်သမား စစ်သွေးကြွများမှ အကြမ်းဖက်မှုများအား ကျူးလွန်၍ ရဲစခန်းအတွင်းထိ ၀င်ရောက်ကာ လက်နက်တိုက်အား ဖောက်ထွင်း၍ လက်နက်များ လုယူမည့်ဆဲဆဲတွင် သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းရသည့် သတင်းများအား မည်သူ မည်ဝါ ကျူးလွန်သည်ကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြခြင်းမရှိသည့်အချိန်တွင် တောင်ကုတ်၌ အပြစ်မဲ့စွာ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည့် မြန်မာမွတ်စလင်မ်များအား သတင်းစာများတွင် “မူစလင်ကုလားလူမျိုးများ”ဟု စော်ကားပုတ်ခတ်သည့် စကားလုံး အသုံးအနှုံးများဖြင့် ဖော်ပြခဲ့ခြင်း၊
(၂) သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်မှူးဇော်ဌေး (အင်တာနက်အမည် မှူးဇော်) ဆိုသူမှ အင်တာနက်တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအား အကြမ်းဖက်သမားများအသွင်ဖြစ်အောင် သတင်းမှားများ ဖြန့်ချိခဲ့သည့်အပြင် အခင်းဖြစ်နေရာ၌ တစ်ဖက်မြင်ပုံရိပ်ဖြင့် ရိုက်ကူးထားသည့် ဓာတ်ပုံများအား ပြည်တွင်းမီဒီယာတချို့နှင့်ပူးပေါင်း၍ နိုင်ငံအ၀ှမ်း ပျံ့နှံ့အောင် ဖြန့်ဖြူခဲ့ခြင်း
(၃) ပြည်တွင်းမီဒီယာများနှင့် ပါတီတချို့မှ ယခုအချိန်အထိ အစ္စလာမ်ဘာသာအား စော်ကားသည့် ရေးသားမှုများအား အင်တာနက်တွင်သာမက စာစောင်များတွင်ပါ ထည့်သွင်း ပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်သော်လည်း မျက်ကွယ်ပြု၍ လွှတ်ထားခြင်းကြောင့် အစွန်းရောက်သူများ ပိုမို၍ သွေးကြွလာစေခြင်း၊
(၄) ဗုဒ္ဓဘာသာ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမား ဘုန်းကြီးများမှ တရားဝင် တရားပွဲများ ပြုလုပ်၍ ကမ္ဘာ့ ဒုတိယ ကိုယ်းကွယ်မှုအများဆုံး ဘာသာကြီးဖြစ်သော အစ္စလာမ်ဘာသာအား တရားဝင် စော်ကားမှုများ ပြုလုပ်နေခြင်းအား အားပေး အားမြှောက် ပြုလုပ်ပေးထားခြင်း၊
(၅) အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်များ ပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါတိုင်း အစိုးရတာဝန်ရှိသူများနှင့် သက်ဆိုင်သူများ ပြောင်ကျကျ ပါဝင်ကျူးလွန်နေခြင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လက်နက်ဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအား ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်နေခြင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တားမြစ်ဆေးများ၊ လက်နက်များ ကုန်ကူးနေသူများအား လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ဖမ်းဆီးမိနေသော်လည်း ထိုသူများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ခြင်းနှင့် ဘုန်းတော်ကြီး သင်္ဃန်းဝတ်များ ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် အများမသိရအောင် ဖုံးကွယ်ထားခြင်း၊
(၆) ယခုအခါ 969 အမည်ဖြင့် အကြမ်းဖက်ဂိုဏ်းထူထောင်၍ နယ်လှည့် စည်းရုံးရေး၊ ဂိုဏ်းသား တိုးပွားရေးအတွက် အင်တာနက်မှတဆင့် ၀ါဒဖြန့်သူများမှာ ပြည်ပရောက် အစိုးရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများဟု သံသယဖြစ်နေသူများနှင့် ၎င်းတို့အတွက် နောက်ကွယ်မှ ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်း၊
(၇) 969 အမည်ခံ သံဃာအကြမ်းဖက်ဂိုဏ်းများအား လွတ်လပ်စွာဖြင့် လှုပ်ရှားမှု ပြုနိုင်ရန် အကာအကွယ်ပေးထားခြင်း၊
(၈) 969 အကြမ်းဖက်ဂိုဏ်းမှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို အကြမ်းဖက် သုတ်သင်ရင် ပြင်ဆင်သည့် လှုံ့ဆော်ရေး စာတန်းများနှင့် လှုပ်ရှားမှုများကို သိသိကြီးနှင့် လွှတ်ထားပေးခြင်း၊
(၉) 969 အကြမ်းဖက်ဂိုဏ်းမှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့နှင့် ဆက်သွယ်သူများကို ဥပဒေမဲ့ အပြစ်ပေး အရေးယူသည့်အခြေအနေများကို ထိန်းသိမ်းမှု မပြုခြင်းကြောင့် ယခုအခါ 969 ဂိုဏ်းသားများနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအကြား ပဋိပက္ခမီးများ စတင်တောက်လောင်လာခြင်း၊
(၁၀) 969 အကြမ်းဖက်ဂိုဏ်း၏ ထိပ်သီးပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ် လူသိများသော မန္တလေးမှ ၀ီရသူ၊ ရန်ကုန် သာကေတမှ ဒယ်အိုးနဲ့ မှော်ဘီမှ ရွှေည၀ါတို့အား သိရှိထားသော်လည်း အရေးယူမှု မရှိခြင်း
ယင်းအချက်များအပြင် အစိုးရတာဝန်ရှိသူများဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအား အခြေအနေအရပ်ရပ်တွင် ခက်ခဲမှုဖြစ်စေရန် မှတ်ပုံတင်များ ထုတ်ပေးခြင်းအား ကန့်သတ်ခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုဇယားများအား ကန့်သတ်ထားခြင်း၊ လုပ်ငန်းများအား ပြန်လည်ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ရှေးဟောင်း သမိုင်းဝင် ဗလီများအား ပြင်ဆင်ခွင့် မပေးခြင်း၊ သမိုင်းဝင် သုသာန်များအား အစဖျောက်နေခြင်း၊ ဘာသာရေးအခြေခံ စာသင်ကျောင်းများအား ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပွဲတော်များ ကျင်းပခွင့် ပိတ်ပင်ထားခြင်း၊ ကလေးသူငယ်များ ပညာသင်ကြားရေးတွင် ခွဲခြားမှုများ ပြုလုပ်ထားခြင်းများရှိနေသော်လည်း တစ်ဖက်တွင်မူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအား အစွန်းရောက်စေမည့် တရားပွဲအမည်ခံ အကြမ်းဖက်စည်းရုံးရေး လှုံ့ဆော်ပွဲများအား လွတ်လပ်စွာ ကျင်းပခွင့် ပေးထားပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ ဘုရားသခင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နဲ့ တမန်တော်မိုဟမ္မဒ်တို့အား စော်ကားနေခြင်းအား အတားအဆီးမဲ့ ပြုလုပ်စေခိုင်းနေခြင်းကြောင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များရဲ့ ခေါင်းဆောင် တမန်တော်မိုဟမ္မဒ်အား အထင်အမြင် လွဲမှားမှုများ ပေါ်ပေါက်၍ မုန်းတီးလာစေခြင်းအား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များဘက်မှ ပြန်လည်ချေပ ရှင်းလင်းတင်ပြနိုင်ရန်အတွက် အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးနေခြင်းအပေါ် အခွင့်ကောင်းယူ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာ အစွန်းရောက် 969 အကြမ်းဖက်ဂိုဏ်းဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို သွေးခွဲပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာအား မြန်မာပြည်မှ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် အမြစ်ပြတ် သုတ်သင် ချေမှုန်းရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပြီး မြို့ရွာအနှံ့တွင် လှုပ်ရှားမှုများ အရှိန်မြှင့် လုပ်ဆောင်လာနေကြပါတယ်။
သို့သော် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကမူ မြို့ရွာတိုင်းတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် ပူးတွဲ၍ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ ဘာသာရေးတွေကို အရှိန်မပြတ် လုပ်ဆောင်ရင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို ချစ်မြတ်နိုးသော တမန်တော် မိုဟမ္မဒ်ရဲ့ နောက်လိုက်များအဖြစ် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းလျှက် ရှိနေပါကြောင်း “အလင်းမျက်ဝန်း”မီဒီယာရဲ့ အယ်ဒီတာ့ အာဘော်အဖြစ် တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Myanmar Muslim Net shared Kay Te Zat O‘s status.
This entry was posted on March 14, 2013 at 5:13 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
10 Responses to “969 အဖွဲ့မှ အကြမ်းဖက်ရန် လှုံ့ဆော်နေသော်လည်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များမှ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းလျှက်ရှိ”
March 14, 2013 at 5:40 am | Reply
သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်မှူးဇော်ဌေး (အင်တာနက်အမည် မှူးဇော်) ဆိုသူမှ အင်တာနက်တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအား အကြမ်းဖက်သမားများအသွင်ဖြစ်အောင်
March 14, 2013 at 2:17 pm | Reply
ကျေးဇူးပါ Anti – Islam တွေရေ …
၀ိဝါဒ ကွဲပြားနေတဲ့ မွတ်စ်လင်မ်တွေ
မခေါ်မပြောဘဲ နေကြတဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေ
မင်း ဒီနေရာမှာရှိရင် ငါမလာဘူး ပြောထားတဲ့ မွတ်စ်လင်မ်တွေ
အချင်းချင်း လက်ပြန်တွဲလာကြပြီလေ …
မင်းတို့ ဗလီ ငါမလာဘူးဆိုတဲ့ လူတွေ
မင်းရှေ့ဆောင် လုပ်တဲ့ ဗလီ ငါတို့ မဖတ်ဖူးဆိုတဲ့လူတွေ
မင်းမျက်နှာ ငါ မကြည့်ချင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေ
အခု အတူတူ ထမင်း ထိုင်စားနေကြပြီလေ …
ဗလီ လာဖို့ မနဲ ခေါ်ရတဲ့လူတွေ
အဇန် ဆိုသံကြားရင် ဗလီရဲ့ အဝေးကို ထွက်ပြေးတဲ့လူတွေ
အခုဆို ဗလီပေါ်မှာ နမားဇ် ၅ ကြိမ် ရောက်နေပြီလေ …
ကိုယ့်ဘာသာဝင် အချင်းချင်း ချစ်ရမယ်ဆိုတာတွေ
နားလည် လာပါပြီလေ …
အသင်တို့ရော Anti – Islamic လုပ်တော့
ဘာတွေ တိုးတက်လာလဲ သိခွင့်ရှိရင် ပြောပြပါလေ ???
March 27, 2013 at 5:58 am | Reply
ကျွန်တ်ာတို့ အခုဖြစ်ဖျက်နေတာတွေကကျွန်တော်တို့ 
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအားလုံးအပေါ်မှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ ။အခုလို့ ဘာသာရေးစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေခြင်းဟာ..
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့ အမိန့် ကိုမနာခံပဲ…အပြစ်တွေကြားမှာပျော်နေကြတဲ့သူတွေအဖို့ ကျွန်တော်တို့ 
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကဖေါက်ပေးလိုက်တယ်လျို့ သဘောထားကြပါလို့ ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်
June 19, 2013 at 4:22 am | Reply
ဟုတ်ကဲ့ ယခုလည်းအကြမ်းဖက်မှုများ ပြုလုပ်ရန် မော်ကျွန်း ကျုံမငေးမြို့များမှာအာဏာပိုင်များပါ ပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ် ကျုံမငေးမြို့မှာဆိုရင်မြင့်သိန်းဝင်း ရာအိမ်မှူး ခင်မောင်ဝင်းမြို့သစ်ရာအိမ်မှူး ချဲဒိုင် လောင်းကစားမိသားစုဝင်အားလုံး လမ်းသမိုင်သက္ကန်းခြုံကြက်ဖ ဦးသုမနစက်ရုံကျောင်းဆရာတော်ဇေတ၀န်ကျောင်း၌ ဘုတ်ထိုင်ပြုလုပ်လျှက်ရှိကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသူ
June 19, 2013 at 3:49 pm | Reply
အလာဟ်အိမ်တော်တွေကိုဖျတ်ဆီးတဲ့လက်များ နှုဝဲ သွားပါစေ အာမိန်း
June 19, 2013 at 3:59 pm | Reply
ယနေ့မန္တလေးတိုင်း ထဲရှိ မွတ်စလင်ရွာတွေမှာ ရဲများက လက်နက်တွေ မွတ်စလင်အိမ်တွေမှာ လိုက်လံသိမ်းဆည်းနေပါသည် ။ဒါကဘာသဘောလဲ ။၉၆၉ အောက်တန်းစားများအတွက် ကူညီပေးနေတာလား ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မပြီးမချင်း သတိနဲ့သာနေကြပါ ။အစ်ခွဝါတို့
June 19, 2013 at 4:03 pm | Reply
အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဘယ်ဘာသာဝန်တွေက အောက်တန်းစားလဲ ဆိုတာ စကားလုံးတွေ က ဖော်ပြနေပြီ
October 1, 2013 at 12:17 pm | Reply
လူဆိုတာသမိုင်းလှဖို့ပဲလိုတယ်။ ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်တစ်နေ့ မုချသေရမှပါ အသင်တို့သေချင်းတရားကိုမမေ့ထားပါနှင့်။
January 2, 2014 at 4:32 am | Reply
မွတ်စလင်ညီနောင်များခင်ဗျား ( ရွှေမြိတ်သား) shwemyeiktharr.blogspot.com ကို ၀င်ရောက်လေ့လာကြည့်ကြစေလိုပါတယ် ထူးခြားတာလေးတွေ တွေ့ကြရမှာပါ
ဆီရာဇူ ( ခ ) ဦးကျော်နိုင် Says:
January 19, 2014 at 4:23 am | Reply
မှန်တယ်…969 အဖွဲ့ ဟာလူတွေကို စည်းရုံး မကောင်းတရားတွေဟော နဲ့ ကျွန်တော်တို့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို သွေးတိုးစမ်းနေတာဘဲ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလည်း ခင်ဗျားတို့969 အဖွဲ့ တွေ 2015 မဲဆန္ဒရွှေးကောက်ပွဲ မရောက်မချင်း သတိနဲ့ သာနေကြပါ